Tambo yePowerPod tambo inogona kubviswa, asi haufanire | Ndinobva mac
Chimwe chekushushikana icho vese vezvenhau nevashandisi vaive nacho nezvePambaPod yaive nehukama netambo yemagetsi, tambo yaitaridzika senge yakabatanidzwa muchigadzirwa uye ichatimanikidza kuenda kuburikidza neApple bhokisi kukwanisa kuitsiva kana chipfuwo chedu chikachiitira hutsinye.
Kupesana nezvinoitwa neApple, iyo Cupertino-based kambani yakasimbisa zviri pamutemo izvo tambo yakanga isina kubatanidzwa muchigadzirwa, kana izvo zvaigona kutsiviwa. Asi sezvanga zvichitarisirwa, kudzamara zvikamu zvekutanga zvatanga kusvika kune vatengi vekutanga, hatina kukwanisa kuziva kuti hurongwa hwekubatanidza chii.
Vakomana vari pa9to5Mac, vanetsekana nekuona ko iko kushanda uye kubatana kwetambo yemagetsi, tambo, iyo sezvatinogona kuona muvhidhiyo, inoda mukana wakakura wesimba rakasimba kuti ikwanise kuitora. Kana ichinge yaita, "kuombera" kunonzwika kuchisimbisa kuti yabuda nemazvo, asi nzira iyi yekuitora inogona kunge isiri iyo inonyanya kukodzera, sezvo iine zvese zvinoratidza kuti tikazviita kakawanda, pakupedzisira tambo ndicharega.
Kana tichiisa tambo kumashure mugomba remagetsi, tinonzwa "kuombera" zvakare, tichisimbisa kuti tayiisa nemazvo. Iyo tambo, sekuona kwedu mukushambadzira, haisi yakajairwa tambo (isu hatina kutarisira zvishoma kubva kuApple) saka kana paine kuputsika, zvingave zvakanaka kuti isu tiende kuchitoro cheApple kuti titsiure icho chinoenderana kana isu tisingade kuchengetedza tambo muruoko uye kubatana mukati mePambaPod. Mutengo wekambo i $ 29 chete, mutengo "wakajairika" kana tikachienzanisa nevamwe vari mukambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Tambo yePowerPod tambo inogona kubviswa, asi iwe haufanire
Citizen Juca akadaro
Zvakanaka, ndakaona mune ongororo kuti tambo yakakamurwa, saka panenge pasisina dambudziko mukuibvisa nekuipfeka?
Pindura Citizen Juca
TrendForce inoisa Apple pamusoro peAsus mune chinzvimbo chekutengesa kwemakomputa